“ေ၇ွးကောက်ပွဲ” အပြီးနောက်တနေ့ဝယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » “ေ၇ွးကောက်ပွဲ” အပြီးနောက်တနေ့ဝယ်…
Posted by maungmoenyo on Nov 7, 2010 in 2010/2012/2015 Election | 19 comments
(၁) အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အဆင့်တွေမှာဝင်အေ၇ွးခံတဲ့ ကြံ့/ဖွံ့ပါတီဝင်တွေကမဲအပြတ်အသတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဲလိမ်လို့သိပ်အဆင်ပြေလို့ပါ။
(၂) ခ၇ိုင်၊နဲ့အထူးသဖြင့်မြို့နယ်နဲ့၇ပ်ကွက်ကျေး၇ွာတွေမှာ၇ှိတဲ့ကြံ့/ဖွံ့တွေကတော့အခက်အခဲနဲနဲပါးပါး၇ှိမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဲလိမ်၇င်လဲပေါ်တင်ကြီးဖြစ်နေမှာမို့ပါ။
(၃) ၇န်ကုန်မှာ၇ှိတဲ့သံတမန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့စာနယ်ဇင်းတွေကိုဖိတ်ကြားပြီးဖြစ်လို့သူတို့ကိုလုပ်ဇာတ်တိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့မဲ၇ုံတွေမှာ၊ စစ်တပ်နဲ့ကြံ့/ဖွံ့ကကြည်ခြေနီ/မီးသတ်ဝတ်စုံတွေခါတော်မှီလဲထားကြတဲ့လံကြုတ်တွေနဲ့မဲထဲ့တာကိုပြပြီးအတင်းဓါတ်ပုံတွေ၇ိုက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ မဲထဲ့တာတွေ၊ မဲဆန္ဒ၇ှင်တွေကိုငွေမြက်မြက်ကလေးပေးပြီး “လွတ်လပ်ပြီးတ၇ားအမျှတဆုံးမဲထဲ့၇လို့ဂုဏ်ယူပါတယ်”ဆိုတာပြောခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ပြုံးပြုံး၇ွှင်၇ွှင်၇ယ်မောတဲ့ပုံတွေဓိတ်ပုံ၇ိုက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ မဲေ၇တွက်တာ၊ မဲပုံးကိုသွန်မှောက်ပြတာတွေဓါတ်ပုံ၇ိုက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သူတို့အသင့်ပြင်ထားပြီးတဲ့သတင်းကိုထဲ့ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့အခြားမဲ၇ုံတွေကိုတော့သံဝန်ထမ်းအပါအ၀င်စာနယ်ဖင်းသမားတွေသွားခွင့်၇မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းပြချက်ကတော့၇ှင်းပါတယ်။ မဲဆန္ဒ၇ှင်တွေ၇ဲ့လွတ်လပ်စွာမဲပေးခွင့်ကိုမထိခိုက်စေ၇ဆိုတဲ့ဥပဒေနဲ့ကိုင်ပေါက်ပါလိမ့်မယ်။
(၄)နောက်တနေ့သတင်းတွေမှာကြံ့/ဖွံ့ကအပြတ်အသတ်နိုင်ကြောင်းတွေ့၇ပေမဲ့၊ ဗိုလ်သိန်စိန်အပါအ၀င်ထိပ်တန်းေ၇ွးကောက်ပွဲဝင်ဗိုလ်ချုပ်များ၇ဲ့မျက်နှာမှာသိပ်ထူးခြားတဲ့စိတ်လှုပ်၇ှားမှုတွေတွေ့၇မယ်မထင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအလိုအလျောက်နိုင်ပြီးသားဆိုတာအပိုင်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သလို၊ အလိုအလျောက်၇ခွင့်၇ှိတဲ့အခွင့်အေ၇းလို့သူတို့ကိုယ်သူတို့သတ်မှတ်ထားကြလို့ပါ။ အောက်ပိုင်းအဆင့်မှာနဲ့ဒေသတွေမှာအေ၇ွးခံကြသူတွေသာအောင်ပွဲခံကြမှာပါ။
(၅)ေ၇ွးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အခြားအတိုက်အခံပါတီများကတော့ေ၇ွးကောက်ပွဲ၇လာဒ်များကိုကန့်ကွက်ကြောင်း၊တ၇ား၇ုံးမှာတင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မ၇ှင်ကိုကန့်ကွက်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကိုတိုင်မှာအသိပေးမှာဖြစ်ကြောင်းအသံသေးအသံကြောင်တွေနဲ့ထအော်ကြ၇င်းကြာတော့မောသွားပါလိမ့်မယ်။ေ၇ွးကောက်ပွဲပြီးတာနဲ့၇ုံပုံငွေကိုင်တွယ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့စကားစများကြပါလိမ့်မယ်။ အနစ်နာခံကြသူတွေအချင်းချင်းကွဲကြပြဲကြဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ သူတို့၇ဲ့နိုင်ငံေ၇းလုပ်ကွက်တွေကသူတို့၇ဲ့နောက်ကြောင်းနိုင်ငံေ၇းကြိုးပမ်းအားထုတ်ချက်အားလုံးကိုဖျက်ဆီ၇ာေ၇ာက်သွားစေမှာပါ။ ပြီးတော့တပ်မတော်လုံခြုံေ၇းကညဘက်လာတံခါးခေါက်တဲ့ဒုက္ခကိုစတင်ကြုံကြိုက်ကြ၇ပါလိမ့်မယ်။
(၆) နယ်စပ်တိုင်း၇င်းသားဒေသတွေမှာတော့စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနဲ့စီးပွားေ၇းအလွမ်းသင့်ပြီးသားတွေလဲမဲနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ယှဉ်ပြိုင်ဘက်တွေမ၇ှိတာလဲပါပါတယ်။
(၈) ဒေါ်စုလွတ်မြောက်လာပြီး၊လူထုနဲ့နီးစပ်ခွင့် ၇က်(၉၀)လောက်တော့၇ပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ထင်ပါတယ်။ မသေခြာ(၅၀/၅၀ % ပါ) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၇က်(၉၀)အတွင်းမှာအစိုး၇ဖွဲ့၇မှာမို့၊ စစ်အစိုး၇ကနိုင်ငံတကာကိုနောက်တကြိမ်သဘောထားကြီးကြောင်းပြဘို့လိုပါတယ်။
(၉) နောင်တက်လာတဲ့ အစိုး၇ကို(၇က် ၉၀ အကြာမှာ) ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာ(မြောက်ကို၇ီးယား၊အီ၇န်။တ၇ုတ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကစပြီး)က၀မ်းမြောက်ကြောင်းသ၀ဏ်လွှာတွေသတင်းစာတွေမှာနေ့စဉ်၇က်ဆက်ထဲ့တာတွေ့၇မါလိမ့်မယ်။
(၁၀) နောင်တက်တဲ့အစိုး၇မှာဗိုလ်သန်းေ၇ွှပါ၇င်တော့၊ မဲအေ၇ွးမခံ၇ဘဲေ၇ွးကောက်ပွဲမှာအေ၇ွးခံ၇တဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမ္မတဖြစ်မှာမို့…တကမ္ဘာလုံးကအံ့သြခြင်းမကအံ့သြကြပါလိမ့်မယ်။
မလွတ်လပ်တဲ့ ညစ်ပတ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြီး ယနေ့စတင်ပါပြီ..။ အဖြေကတော့ ချဲထီလောက စကားနဲ့ ပြောရရင် (ဒဲ့မရှော်..တွတ်မပေး.. ဒိုင် မပြေးတဲ့) အပိုင်ပွဲကြီးပါဗျို့..။
ဗိုလ်သန်းရွှေက နောက်နေ့မှာ ပုံမှန်အတိုင်း တရုပ်သိုင်းကား ဇာတ်ထုတ်ရှည်ကြည့်ပြီး သိုင်းလောကဘုရင်ရူးမြဲ ရူးပါလိမ့်မယ်။ ဗိုလ်မောင်အေးကလည်း ဘီလူးလေဘယ်ပုလင်းကိုဖက်ပြီး မူးမူးနဲ့အိပ်မြဲအိပ်ပါလိမ့်မယ်။ ယူနီဖောင်းချွတ်လိုက်ရတဲ့ ဗိုလ်ပြုတ်ကြီးများကတော့ တောင်ရှည်ပုဆိုး၊တိုက်ပုံနဲ့ခေါင်းပေါင်းဝတ်ဖို့ စကျင့်ကြပါတော့မယ်ခင်ဗျား။
Than shwe have already arranged to celebrate victory at Nov 8,2010.Sorry for all failture on election results!
ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ခုချိန်ထိဆိုရင် အားလုံးပါဝင်ခွင့်မရှိတာ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတာတွေအပေါ် ၊ ဥပမာတွေထဲမှာဆိုရင် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်မရအောင် ပိတ်ပင် ကန့်သတ်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့တာ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂,၁၀၀ ကျော်ကို ဆက်ပြီး အကျဉ်းချထားတာ၊ နိုင်ငံတကာက ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသူတွေနဲ့ ပြည်ပသတင်းထောက်တွေကို ခွင့်မပြုတာတွေပါဝင်တယ်။ ဒါ့အပြင် လူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားတွေ အများစုနေထိုင်တဲ့ ဒေသအများအပြားမှာ မဲပေးခွင့်မရတာအတွက်လည်း စိတ်ပျက်ရတယ်
ခုလောလောဆယ်တော့ ၀င်မပြောချင်သေးဘူး၊ စောင့်ကြည့်နေဦးမယ်…
အင်တာနက်ကြီးကောင်းနေတဲ့အဓိပ္ပါယ်က….။ သတင်းတွေ ထွက်လို့ရသည်ပေါ့..။
အဖြေရှိတဲ့ ပုစ္စာဖြေရတာ ကျုပ်တော့ အရသာတွေ့တယ်..။
ပြောပါခင်ဗျ..ပြောကြပါ..။ မှားရင်လည်း မလျှော်ခိုင်းပါဘူး..။
ဟုတ်တယ်ဗျို့၊ ဟုတ်ပါ့။ ကျနော်တို့ မဲရုံမသွားဘူး၊မဲမပေးဘူး၊ မတပ်သာတဲ့အခြေအနေမှာပါယ်မဲထဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဗမာ့ထွက်ရပ်-သပိတ်မှောက်တိုက်ပွဲဝင်တွေလဲအောင်မြင်သင့်သလောက်အောင်မြင်ပါတယ်။
သူ့ကိုအများဆုံးပံ့ပိုးပေးတဲ့ Democratic party နဲ့ NDF တို့ရဲ့ကိုယ်ကျိုးရှာတကိုယ်ကောင်းစိတ်တွေကြောင့်ဘဲ။ သူတို့ကြောင့်လူတချို့မျက်စိလယ်လမ်းမှားပြီးမဲရုံသွား၊မဲပေးလုပ်မိပြီ။ ဗမာတွေရဲ့စစ်တပ်ကျွန်ဇာတာရှည်အောင်ဒီကောင်တွေလုပ်လိုက်ကြပြီ။ မဲရုံသွားမိတော့မဲရုံမှာလူတွေရှိ၊အဲဒီတော့သန်းရွှေရဲ့မဲပေးပွဲလုပ်ဇာတ်ကတရားဝင်လူတွေကထောက်ခံသလိုလိုပေါ့။
မဲပေးမိတော့ သန်းရွှေရဲ့အောက်လမ်းမျက်လှဲ့တန်ခိုးနဲ့၂ဆ၃ဆ တိုးပြီးစစ်တပ်ကမဲတွေထပ်ရပြန်ရော။
နိုင်ငံတော်ရဲ့အဓိကတရာယ်ခံကေံတာ့သန်းရွှေနဲ့သူရဲ့ကျွန်ပါးဝ Democratic နဲ့ NDF တွေဘဲ။
ဦးမိုညို ကြီးရဲ့မှန်းချက်တွေက ကောင်းလိုက်တာနော်…..း)
နိုင်ငံေ၇းခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီးတွေ၇ဲ့သမီး(၃)ပါးတတော့သူတို့မိဘတွေလက်နဲ့ေ၇းခဲ့တဲ့ပြောင်မြောက်လှတဲ့နိုင်ငံေ၇းသမိုင်းတွေကို၊ သူတို့ခြေထောက်နဲ့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါပြီ။ NLD ခွဲထွက်တွေကတော့ပေါက်တဲ့မထူးမထူးပြီမို့၊ စစ်အစိုး၇၇ဲ့ပေးစာကမ်းစာလေးတွေခုလောက်ဆိုမျက်စောင်းထိုးလောက်ပါပြီ (အေ၇ွးချယ်ခံများကိုဆိုလိုတာပါ။)အေ၇ွးမခံ၇သူတွေ (ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေထင်ပါတယ်) ကတော့အသံသေးအသံကြောင်တွေဟစ်ကြတုံးနော်။ သူတို့အတွက်အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံမျက်နှာစာမှာနေ၇ာမ၇ှိတော့ပါဘူး။
ပြည်သူသန်း(၆၀)အပါအ၀င်၊ အတိုက်အခံတွေ၊ ပြည်ပအင်အားစုတွေအားလုံးကဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဒီ “ကြိုတင်မဲ” မျက်လှည့်ကိုကြိုမတွေးမိကြတာလဲလို့…..???????
ကိုင်း- အဖြေကရှင်းနေပြီ။ ဘာမှပြောလို့တော့မရတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် – သူတို့ရဲ့ အခြေခံဥပဒေမှာ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပြန်ရုပ်သိမ်းနိုင်တဲ့ Rights of Recall ပါတယ်။ အခု ရသွားတဲ့ ကြံ့ဖွံ့တွေ မဲဆွယ်ရံပုံငွေဘယ်လိုသုံးတယ်၊ ဥပဒေနဲ့ညီမညီဆိုတာတွေကို အချက်အလက်နဲ့ တင်ပြပြီး Recall ပြန်လုပ်လို့ရသေးတယ်။ ဒီသူခိုးတွေလုပ်ထားတဲ့ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်တွေ အများကြီးပါ။ ရအောင်ရှာ၊ မိအောင်ဖမ်း၊ ပြည်သူကိုတင်ပြ ပြီး Recall ပြန်လုပ်ကြတာပေါ့။ အဲလိုလုပ်နိုင်ရင် ပိုတောင် အရှက်ကွဲအုန်းမယ်။
(၁၁) တရုတ်ကလဲ ထောက်ခံမြဲထောက်ခံပါလိမ့်မရ်။
ဒီအဖြေရဲ့ တရားခံက No Vote ဆိုလိုက်အော်နေတဲ့ အဖိုးကြီးတွေရဲ့ စနက်လဲပါတယ်။ ဒီလူတွေက ကြည့်ရတာ အစိုးရလူတွေဖြစ်မယ်။ No Vote လုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက် လူတွေမဲသွားမပေးကြတော့ဘူး။ လာမပေးတဲ့သူတွေရဲ့ မဲတွေ ကြံ့ဖွံ့မဲတွေဖြစ်ကုန်ပြီး ကြိုတင်မဲတွေဖြစ်ကုန်တာ။ No Vote ကိစ္စကို အစိုးရက ဥပဒေအရအရေးမယူတာ အဲဒါကြောင့်ပါ။ သူတို့ကမဲမပေးလေ ကြိုက်လေ ဘဲလေ။ မလာရင် ကြံ့ဖွံ့မဲလွယ်လွယ်လေးလုပ်လို့ရတာပေါ့။ နိုင်ငံရေးသမားဆိုရင်ဒါတွေကြိုမြင်တတ်ရမှာပေါ့။ အခုတော့ပြောလိုက် လုပ်လိုက်တာတွေက တလွဲတွေကြီးဘဲ။ စိတ်ဆင်းရဲတယ်။
၁၂ ကတော့ ထူးမခြားနား လူလိမ်များ မြန်မာပြည်ကို အုပ်ချုပ်သွားတော့မှာ ပေါ့နော်…….